Maxay Tahay Sababta Ganacsiga B2B ee Adkaysiga leh uu u yahay Jidka kaliya ee ay u soo Saaraan Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Soo Dira COVID-19 | Martech Zone
Maxay Tahay Sababta Ganacsiga B2B ee Adkaysigu u yahay Wadada Kaliya ee Loogu Soo Gudbiyo Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Soo Dira COVID-19
Khamiista, Diseembar 17, 2020 Khamiista, Diseembar 17, 2020 Rajneesh Kumar
Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu daruuro aan mugdi ku jirin ku riday muuqaalka ganacsiga wuxuuna keenay in la xiro howlo dhaqaale oo dhowr ah. Natiijo ahaan, ganacsiyada ayaa laga yaabaa inay markhaati ka noqdaan isbeddel ku yimaada silsiladaha saadka, moodellada hawlgalka, habdhaqanka macaamiisha, iyo istiraatiijiyadaha soo iibsiga iyo iibka.
Waa muhiim in la qaado tillaabooyin firfircoon si ganacsigaaga loo dhigo meel aamin ah loona dardargeliyo howlaha soo kabashada. Adkaysiga ganacsigu wuxuu tagi karaa waddo dheer oo laqabsashada duruufaha lama filaan ah iyo hubinta joogtaynta. Gaar ahaan ciyaartoyda ku jirta silsiladda sahayda ganacsiga ee B2B, waqtiyada aan la hubin sida kuwan oo kale ayaa soo bandhigi kara a bisad darbiga xaalad. Waxaad la kulmi kartaa hoos u dhac suuqa ka yimaada ama ay kugu adkaato inaad la kulanto kor u kaca baahida. In kasta oo labada xaaladoodba ay si isku mid ah u dhib badan karaan, haddana soosaarayaasha iyo qeybiyeyaashu waxay ku tiirsanaan karaan sii socoshada ganacsiga codka iyo adkeysiga si looga hortago caqabadda loona hubiyo in sahayda aan laga hortegin ee faafa ee baaxaddan iyo baaxadda leh.
Xaaladda hadda jirta waxay ku qasabtay ganacsatadu inay isbeddello qaabdhismeed ah ku sameeyaan istiraatiijiyaddooda suuqa tag. Halkan waxaa ku yaal meelaha muhiimka ah ee xoogga saaraya oo kaa caawin kara inaad xaqiijiso sii wadida iyo inaad dhisto weji adkeysi leh inta lagu jiro dhibaatada caafimaad ee ugu xun qarniga.
kabashada Masiibada - Ganacsiyadu waa inay qiyaasaan saamaynta aafadu ku leedahay awoodaha hawlgalka. Jawaab deg deg ah, ganacsiyada badankood waxay aasaaseen xarumo neerfayaal ganacsi oo leh kooxo iskutallaab ah si loo yareeyo saameynta aafada ee howlaha iibka. Waxay sidoo kale sameeyeen dib-u-habeyn sida shuruudaha deynta oo dabacsan si ay u taageeraan la-hawlgalayaasha kanaalka. In kasta oo dadaalladaan ay gacan ka geysan karaan la-kulanka himilooyinka degdegga ah, qorsheynta taxaddarka leh iyo fulinta waxay muhiim u yihiin soo kabashada muddada-dheer.
Qaabka Digital-First - Iibinta B2B waxay u badan tahay inay aasaas ahaan wax ka beddeli doonaan xilliyada ka dambeeya COVID-19 iyadoo diiradda la saarayo khadadka khadka tooska ah ee dhexdhexaadinta. Faafida waxay siisey dardar gelinta howsha socota ee dijitaalka dijitaalka. Maaddaama ganacsiyada B2B ay saadaalinayaan koror ballaaran oo isdhexgalka dijitaalka ah mustaqbalka dhow, waa inaad fiirisaa dhaqdhaqaaq kasta oo iib ah si loo ogaado fursadaha suurtagalka ah ee otomatiga dijitaalka ah. Si loo hagaajiyo khibrada dhijitaalka ah, hubi in iibsadayaashu ay ka heli karaan macluumaad diyaar ah bogga, isla markaana isbarbar dhigaan alaabada iyo adeegyada. Sidoo kale waa inaad ku hagaajisaa wixii arrimo farsamo ah waqtiga dhabta ah oo aad raadisaa habab cusub oo cusub oo kor loogu qaadayo khibrada macaamiisha.
Alaab-qeybiyeyaasha Dib Uga Fiirsada Ciyaartooda - Alaab-qeybiyeyaasha bixiya khibrad dijitaal ah oo la isku halleyn karo oo shakhsi ahaaneed leh feejignaan sii kordheysa oo ku saabsan xawaaraha, hufnaanta, iyo khibradda ayay u badan tahay inay si dhakhso leh uga soo kabtaan oo ay u koraan saldhiggooda macaamiisha. Dadaalkan, waa inaad ka faa'iideysataa tikniyoolajiyadda oo aad soo bandhigtaa astaamaha macaamiisha u fiican sida wada sheekaysiga tooska ah ee kaa caawin kara fahamka shuruudaha gaarka ah isla markaana si dhakhso leh uga jawaabaan. Marka lagu daro isdhexgalka websaydhka, alaab-qeybiyeyaashu waxay filayaan taraafikada kororka ee barnaamijyada moobiilka iyo bulshooyinka warbaahinta bulshada. Sidaa darteed, caadiga cusub, waxaad u baahan tahay inaad isbedello xag-jir ah ku sameyso istiraatiijiyadda iibintaada si aad awood ugu yeelatid inta ugu badan fursadaha ku jira muuqaalka muuqaalka.
eCommerce iyo Iskaashiga Dijital ah - Dhibaatada hadda jirta waxay fursad u tahay ballaarinta eCommerce-gaaga iyo awoodaha dijitaalka ah. eCommerce waxaa laga filayaa inay door muhiim ah ka ciyaarto marxaladda soo kabashada iyo wajiga xiga ee koritaanka. Haddii ganacsigaagu ka maqan yahay awoodaha dhijitaalka ah, waxaa suuragal ah inaad ku lumiso fursado aan dhammaad lahayn oo ku saabsan muuqaalka khadka tooska ah. Ganacsiyada B2B ee horay u maal galiyay dhismaha eCommerce iyo iskaashiyada dhijitaalka ah waxay eegi karaan inay ka faa'iideystaan ​​cagaha koraya iyada oo loo marayo dhexdhexaadiyeyaasha casriga ah.
Iibinta Fog - Si loo yareeyo saameynta iibka, ganacsiyada B2B badankood waxay markhaati ka noqdeen u guuritaanka nooc iib iib ah inta lagu gudajiro aafada. Muhiimadda iibinta fog iyo isku xirka iyada oo loo marayo shirarka fiidiyowga, websaydhka, iyo sheekooyinka ayaa si weyn u koray. Inkasta oo ganacsiyada qaarkood ay si buuxda ugu tiirsan yihiin dhexdhexaadiyeyaasha casriga ah si ay u beddelaan iibka goobta, kuwa kale waxay u isticmaalaan xirfadlayaashooda iibka si wadajir ah iibka websaydhka. Badankood waxaa laga helay kanaallo fog inay si siman ama waxtar badan u yeeshaan gaarsiinta iyo u adeegidda macaamiisha. Marka, adeegsiga wadiiqooyinka fog fog waxay u egtahay inay sii kordheyso xitaa iyadoo xaddidaadda safarka la qafiifiyay dadkuna ay ku laabteen goobahoodii shaqo.
Dhiirrigelinta Kale - Burburka daran ee silsiladda saadka inta lagu gudajiray Covid-19 ayaa xoojiyay baahida loo qabo ganacsiyada inay hirgeliyaan isbeddelada istiraatiijiyadda wax soo iibsiga. Burburka ku yimid silsiladda sahayda ayaa caqabad ku noqotay in alaabada ceeriin laga helo iibiyeyaasha qandaraaska la siiyay, gaar ahaan xaaladaha alaabada ceyriinka laga helo adduunka. Si looga gudbo caqabadan, ganacsatadu waxay u baahan yihiin inay eegaan iibiyeyaasha maxalliga ah si ay u soo iibsadaan alaabta ceeriin. Sugida qandaraasyada iibiyaasha maxalliga ah waxay kaa caawin kartaa ka fogaanshaha daahitaanka wax soo saarka iyo qeybinta. Waxa kale oo laga yaabaa inay faa iido leedahay marxaladan si loo aqoonsado badeecadaha iyo agabyada kale.
Qorshaynta Sii Socota iyo Maalgashiga Mudada Dheer - Iibinta B2B, kani waa waqti ku habboon in la kobciyo hoggaamiyeyaasha isla markaana la sameeyo xoogaa maalgashi muddo-dheer ah. La soco lana ilaali xiriirka joogtada ah ee rajada laga qabo dhuumaha lana go'aamiyo fursadaha muddada-dheer. U sheeg iyaga oo ku saabsan qorshahaaga deg-degga ah iyo tallaabooyinka aad qaadi doontid si aad u xaqiijiso sii socoshada. Waxaad si tartiib tartiib ah uga wareegi doontaa ujeedaada jawaabta xaaladaha degdega ah una gudubtaa qaab muddo dheer oo adkeysi hawl leh. Nidaamkan, ka qaybgal qorshayn joogto ah oo adag si aad casharro uga barato dhibaatada taagan. Waa inaad sidoo kale qiimeysaa khataraha hawlgalka ee howlaha ganacsiga muhiimka ah isla markaana aad qabataa laylisyo qorshayn duruufo ah. Horumarinta awooda adkaysiga waxay gacan ka geysan kartaa la tacaalidda dhacdooyinka aan horay loo arag iyo ku soo noqoshada xaaladdii asalka ahayd ee ganacsiga iyadoo saameyn yar ku yeelanayso howlaha.
Qeex Doorka Cusub ee iibka Reps - U wareegista xagga dijitaalista wax saameyn ah kuma yeelaneyso doorka wakiilada iibka kuwaas oo hadda looga baahan yahay inay bartaan aaladaha dijitaalka ah sida Zoom, Skype, iyo Webex. Xirfadleyda iibka ee ka shaqeynaya jawiga B2B waa inay fahmaan aaladaha kala duwan ee internetka si loola macaamilo ugana jawaabaan weydiimaha macaamiisha si wax ku ool ah. Markaad u diyaar garoobeyso kororka iibka dijitaalka ah, faham sida ugu wanaagsan ee loo tababaro loona geeyo xirfadlayaasha iibka marinnada kala duwan si loo bixiyo adeegga iyo taageerada macaamiisha. Tababbarka iyo maalgashiga shaqaalahaaga ayaa hubaal ah inay kasban doonaan abaalmarin mustaqbalka fog.
Ha Sugin Inta Aanu Faafi Doono
Khubaradu waxay soo jeedinayaan in coronavirus uu nala sii joogayo waqti dheer uuna sii faafi doono ilaa iyo inta laga sameynayo tallaal lagu ciribtirayo. Maaddaama ururradu ay raadinayaan inay dib u dhisaan oo ay ku bilaabaan howlahooda shaqaale kooban iyo taxaddarrada lagama maarmaanka ah, waxaa lagama maarmaan ah in dhammaan howlaha la waafajiyo shuruudaha cusub.
Ganacsiyadu waa inay qaataan hanaan firfircoon oo ay raacaan qorshe loo dejiyay si loo hubiyo sii socoshada howlaha iyo ka hortagga khalkhal gelinta sahayda. Hayso alaab diyaar ah horayna u sii diyaari inaadan ku dhaafin fursadda iibka. Maadaama dib u soo kabashada dhaqaalaha ee xilliyada ka dambeeya COVID-19 laga yaabo inay ka dhakhso badan tahay sidii la filaayay, waa inaad u isticmaashaa waqtigan si aad ugu diyaar garowdo dalabka kor u kaca. Xusuusnow, hadaadan hada bilaabin, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad ka faa'iideysato fursadaha soo ifbaxaya waqtigaas waa sax.
Tags: beddelka kaleganacsiga b2bganacsiga e2iibinta b2bqorshaynta sii socoshadaCOVID-19iskaashi digitalhab digital-ugu horeysaysoo kabashada musiibadaiskaashi ganacsisoo kabashada dhaqaalahaLiiskaSaadkamaalgashiga muddada dheersoo saarayaashamasiibokabashadaiibinta fogiibiyeyaasha
Suuqgeeye dijitaal ah iyo hage kobcineed, Rajneesh Kumar ayaa hadda ah madaxa suuq geynta dijitaalka ee Adeegyada Caalamiga ah ee Pimcore. Pimcore waa abaalmarin lagu guuleystay isku-darka shirkad furan oo il-wadaag ah oo loogu talagalay maaraynta xogta sayniska (PIM / MDM), maareynta khibrada isticmaale (CMS / UX), maareynta hantida dijitaalka ah (DAM), iyo eCommerce.
Ka Faa'iidaysiga Shirkadda BlueOcean ee loo yaqaan 'AI' Si Loogu Furo Fahmo Noocyada Taam ahaanta ee Ku Xidhan